Malunga nathi - iTianjin Honest Tech. Co., Ltd ..
Tianjin Ukunyaniseka kweTekhnoloji. Co., Ltd ..
Tianjin Ukunyaniseka kweTekhnoloji. I-Co, Ltd. yasekwa ngo-2014, eyimveliso yobungcali kunye nelithumela kwelinye ilizwe echaphazelekayo kuyilo, uphuhliso kunye nemveliso YOKHUSELEKO LOMZIMBA, IITOWULI NOKUKHANYA KWOKUKHANYA. Simi eTianjin, lelinye lawona mazibuko makhulu kumantla e-China. Zonke iimveliso zethu zithobela imigangatho esemgangathweni yamazwe aphesheya kwaye zixatyiswa kakhulu kwiimarike ezahlukeneyo kwihlabathi liphela. Amaziko ethu axhotyiswe kakuhle kunye nolawulo olukumgangatho ophezulu kuwo onke amabakala emveliso asenza sikwazi ukuqinisekisa ukoneliseka kwabathengi.
Kule minyaka imbalwa idlulileyo yemveliso kunye nolawulo kunye nokuhlola, Ukunyaniseka kumisa inkqubo yolawulo lomgangatho wayo. Ihenjisi ethembekileyo kule minyaka idlulileyo ibisoloko ithobela "ukubeka abantu phezulu, ukujongana nabantu ngokunyanisekileyo" iinjongo zeshishini. Ukuzibophelela ekuboneleleni ngemveliso ekumgangatho ophezulu kunye neenkonzo ezisemgangathweni. Yiba neqela elisebenzayo, elizinikeleyo kulawulo loyilo, kwinkalo nganye kunye neenkqubo zokuvavanya ngokungqongqo kunye nolawulo.
Ngenxa yeemveliso zethu ezikumgangatho ophezulu kunye nenkonzo ebalaseleyo yabathengi, sizuze inethiwekhi yentengiso yehlabathi efikelela iBritani, iMelika, iJapan, iJamani, iSpain, i-Itali, iSweden, iFrance neRashiya, njl.
Ishishini lethu eliphambili kubandakanya ukukhuselwa komzimba, iitawuli, kunye nezibane zeLed. Sinokukunikezela nge-brace yangasemva, inkxaso esinqeni, inkxaso yamadolo, inkxaso yeqatha, itawuli yokuhlamba, itawuli eneenkcukacha zokucoca imoto, ukomisa ngokukhawuleza itawuli yeenwele, kunye netotshi, isibane sentloko, ukukhanya kwebhayisekile, ukukhanya kokuntywila, njl njl. iimveliso onomdla kuzo, nceda ukhululeke ukunxibelelana nathi, kwaye siyakuvuyela ukunceda.
Ukuba unomdla kuyo nayiphi na imveliso yethu okanye ungathanda ukuxoxa ngomyalelo wesiko, nceda uzive ukhululekile ukuqhagamshelana nathi.